uknepalnews.com | Page 2
by hellouknepal - April 6, 2018 April 6, 2018 0
बीबीसी उनीहरु विशाल मरुभुमीका वन्यजन्तु र बोट बिरुवाका रक्षक हुन् । बिश्नोई समाजका मानिसहरु जंगली जनावर र बोट बिरुवाका लागि आफ्नो ज्यान दिनसमेत तयार हुन्छन् । यसकारण जब बलिउड स्टार सलमान खानले कालो हरिणको शिकार गरेको घटना सार्वजनिक भयो तब उनीहरु सडकमा उत्रिए । बिश्नोई आफ्ना आराध्य गुरु जम्भेश्वरले बताएका २९ नियमको पालना गर्दछन्
by hellouknepal - April 6, 2018 0
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले विगतमा भएका सबै खाले क्रान्तीलाई स्विकार गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकिकृत गर्दै आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थिरताको सपना देखाएर गएका निर्वाचनमा भोट मागे । जनताले पत्याए र इतिहासमै शक्तिशाली वामपन्थी सरकार पनि बनिसकेको छ । तर कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकता घोषणा हुन बाँकी छ । निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार उठाएका
by hellouknepal - April 4, 2018 0
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल र नेपाली बैज्ञानीकहरुको योगदान विश्वसामु चिनाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल जीव बिज्ञान समाजले आयोजना गरेको संमृद्धिको लागि बिज्ञान बिषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै डा. भट्टराईले बिज्ञान र प्रविधीकै आढमा बिश्वमा औद्योगिक क्रान्ति सम्पन्न गर्न सम्भव भएको बताए । पछिल्लो
by hellouknepal - April 3, 2018 0
नयाँदिल्ली । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता अन्तिम चरणमा पुगेको बेला भारतस्थित प्रवासी संगठनहरुले भने चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नयाँ पार्टीको प्रवासमा पार्टी संगठन नरहने किसिमले एकता प्रक्रियाअघि बढेको भन्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट संगठनले एकता प्रक्रियामा सहभागी नहुने बताएका हुन् । भारतमा माओवादी
प्रिय कमरेडहरू, वर्गसंघर्ष र अन्तरसंघर्ष दुवैका दृष्टिले आज हाम्रो पार्टी, आफ्नो विकासको अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र सम्भावनायुक्त मोडमा आइपुगेको छ । महान् जनयुद्धका दश वर्षका बहुपक्षीय प्रभाव र परिणाम नै आजका चुनौती र सम्भावनाका प्रमुख कारक हुन् । मा.ले.मा.का आधारभूत सिद्धान्त, इतिहासका अनुभव र वर्तमान घरेलु एवम् बाह्य वर्ग शक्ति सन्तुलनको वस्तुवादी
एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक मंगलबार बस्ने
by hellouknepal - April 2, 2018 0
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली भारत भ्रमणमा जानु अघि एकताको पार्टी ठोस प्रारुप तयार पार्न संयोजन समितिको बैठक बोलाइएको हो । बैठक अपरान्ह ४ बजे वालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बस्नेछ । एकता